University of Western Ontario - Waxbarashada Kanada
University of Ontario Details Western
gaabinta : Uwo
aasaasay : 1878
Ardayda (qiyaastii.) : 37000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Western Ontario
Qor at University of Western Ontario
The University of Western Ontario (Uwo), dib-u-ku tilmaamay sida Western University, waxaa jaamacadda cilmi dadweynaha ah oo ku yaalla London, Ontario, Canada.
Jaamacadda waxaa la aasaasay on 7 March 1878 by Bishop Isxaaq Hellmuth of Sheeko Anglican ee Huron sida “University Western ee London Ontario.” Waxaa lagu daro Huron University College, taas oo la aasaasay 1863. The afar kulliyadood marka hore ahaayeen Arts, Ilaahnimada, Sharciga iyo Medicine. University Western ee London waxaa ugu danbeyn ka dhigay non-madaahibteenu in 1908.
Sida laga soo xigtay 2015 Ciidmada Academic of Jaamacadaha Adduunka (ARWU) qiimeynta, jaamacadda kaalinta 201-300 adduunka iyo 7-16 ee Kanada. The 2011 Qiimeynta University QS World kaalinta jaamacadda 157th adduunka, taas oo toddobaad ee Kanada. Dhawr ka mid ah barnaamijyada Western ayaa sidoo kale kaalinta qiimeynta shaqsi. Cilmiga bulshada ee reer galbeedka waxaa ay gashay kaalinta 96th adduunka ee 2010 QS qiimeynta University Adduunka, iyo reer galbeedka ee Ivey Business School ayaa waxaa kaalinta 1aad ee adduunka ee Category Global MBA ee Bloomberg Businessweek.
jirka Student Co-waxbarasho Western ee ka badan 24,000 matalaa 107 dal oo dunida iyo culimada reer galbeedka ku adkeeyey cilmi-baarista iyo waxbarashada iskaashi iyo iskaashiga on qaarad kasta. Waxaa jira in ka badan 306,000 Qalinjabiyeyaasha kuwa firfircoon caalamka, nool oo ka shaqeeya dunida dacaladeeda. Qalinjabiyeyaasha laga xusi karaa waxaa ka mid ah Saraakiisha Dowladda, aqoonyahano, hoggaamiyayaasha ganacsiga,Nobel Laureates, Rhodes Culimada, oo kuwa ku weheliyana distinguished.
Kooxaha Iyi Western ee, loo yaqaan Mustangs Western, tartami ee shirka Ontario University of fudud Interuniversity Canadian Sport.
Don Wright Kuliyada Music
Macluumaad & Media Studies
Schulich Medicine & Ilkaha
From caqiidada hore ee Bishop Hellmuth in cilmi loo yaqaan caalamka ee culimadeenna top maanta, kuwan madaxda aragti, geesinimada iyo male ayaa had iyo jeer u muuqday inuu mustaqbalka qaabaynta University Western.
Aasaasay on March 7, 1878 by Bishop Isxaaq Hellmuth (1817-1901) of Sheeko ku Anglican ee Huron, 'University Western ee London Ontario' albaabbadeedii oo ardayda furay markii ugu horeysay ee 1881 afar kulliyadood - Arts, Ilaahnimada, Sharciga iyo Medicine.
In 1916, campus hadda laga iibsaday qoyska Kingsmill ah, iyo in 1923 jaamacad la baxshay The University of Western Ontario.
Tan iyo fasalka hore ka qalin ku 1883, jaamacadda waxa uu noqday xarunta firfircoon ee waxbarasho. Iyada oo 12 kulliyadaha iyo saddex jaamicadda la jaalka, maanta Western bixisaa ardayda 36,000-daray in ka badan 400 takhasuso, heerkoodu sareeyo oo aan qaan gaarin.
Waxay ahayd ee Western halkaasoo Sir Frederick Banting kacay hurdo baaxaa ka 1920 iyo ku qoray baxay 25 erayada taas oo horseeday in uu daahfurka of insulin.
Waxay ahayd ee Western halkaasoo barnaamijka Immersion Faransiis ugu horeysay Kanada ayaa waxaa la aasaasay at Trois-Pistoles, CNIB, in 1932 - Barnaamij taasoo socota illaa maanta.
Waxay ahayd ee Western halkaasoo cilmi hogaaminayo Ivan Smith horumariyo 'bam Cobalt' ugu horeeyay dunida ee ay ula dhaqmaan kansarka 1951, sii kordhaya heerka daawo ee kansarka ilma-mareenka inay 75 boqolkiiba ka 25 boqolkiiba.
Oo intii xididdada our heer sare laftiisa taariikhda, Western sii wadaan in ay isha daahfurtay in jiilka soo socda.
Western, hoggaamiye ee injineernimada dabaysha tan 1965, jirrabaya dhismayaasha sida World Trade Center, Sears Tower iyo Jakarta Tower, sii wadi doonto Lagaga la furitaanka xarunta cilmi WindEEE wadini.
Western, hoggaamiye waxbarashada ganacsi tan iyo markii la aasaasay, ayaa sii waday in ay u horseedi guriga iyo dibadda mahad dhismaha ah Richard Ivey School gobolka-of-the-art of Business ee 2012 iyo furitaanka dhismaha dugsiga ganacsiga ugu horeysay North America ee Hong Kong ee 1998.
Western, a hogaamiyaha horumarinta caafimaadka tan iyo markii la aasaasay, ayaa sii waday in ay ku hardiyi abuurnimo ugu dhawaan markii tallaalka HIV horumariyo by Dr. Caruurta-Yong Kang helay oggolaansho ay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka Maraykanka si ay u bilaabaan tijaabo aadanaha, a horreeyey ee noociisa ah, in 2012.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Western Ontario ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Western Ontario rasmiga ah Facebook
University of Western Ontario dib u eegista
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Western Ontario.
Jaamacadda York Toronto